RUMAYSO AMA HA RUMAYSAN: Miyaad og tahay inuu jiro Ciyaaryahan hal kulan horyaalka Soomaaliya ka dhaliyay 13 gool – Gool FM
Byare June 15, 2018
(Muqdisho) 11 Juunyo 2018 Laga yaabee in aad aamini wayso in hal kullan lagu dhaliyo 13 gool, ciyaar rasmi ah oo waliba u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya.
Waxa ay ahayd 2002 xiligaas oo ay horyaalka ku guulaysatay Elman.
Waxaa guddoomiye xiriirka ka ahaa Faarax Sindiko AUN, iyadoo taleefanka gacanta (Mobile) loo qorsheeyay in la siiyo xiddigii qaadaa gool dhallinta.
Gool dhalinta waxaa ku tartamayay Shaarkeey oo ka tirsanaa Dekedda, Cabdoow Abba oo qayb ka ahaa Daalo iyo Ciise Dheere oo Midnimo u ciyaarayay.
Kooxda Dekedda ayaa wajahday Faynuus oo markii dambe loo bixiyay Horseed, waxa uuna Shaarkeey ka dhaliyay lix gool.
Cabdoow Abba oo Gool FM la hadlay ayaa yiri” kaddib ciyaartii Dekedda iyo Faynuus, waxaa isoo wacay Ciise Dheere oo ii sheegay in Shaarkeey loo daayay lix gool, isagoo i yiri isku tasho kullanka soo aadan.
“Kaddib waxaan wajahay Bariga Dhexe anoo ka tirsan Daalo waxaana ka dhaliyay 13 gool ayuu yiri Cabdoow Abba Nuur.
Ugu dambayn xiriirka ayaa kansalay sanadkaan Gool dhalinta waayo waxa ay nagu eedeeyeen musuq maasuq oo ah in goolasha naloo daayay ayuu hadalkiisa kusoo koobay Cabdoow.
Shaarkeey oo isna dhankiisa la hadalnay ayaa yiri” waxaan ahaa weeraryahan da’yar oo waliba awood leh in uu dhaliyo goolal badan, waxaana cadeenayaa in goolashaas aan si awood ah ugu dhaliyay Faynuus uusan ku jirin hal gool oo la ii daayay.
Labada xiddig ayaa qayb ka ahaa horyaalkii soo dhamaaday oo ay ku guulaysatay Dekedda.
Shaarkeey ayaa u diiwaan gashnaa Horseed,halka Cabdoow isna uu u ciyaarayay Jeenyo,waxaana ka soo wareegatay 16 sanno markii lagu eedeeyay in goolasha loo daayay xiddigahaas.
Ronaldo oo sheegay in Mohamed Salah uu ku guulaysan karo Ballon d'Or